Soosaarayaasha kululeeyaha galvanized kulul | Shiinaha Hot faleebo galvanized Shirkado bolt, Factory
Qalabka biraha aan lahayn
Qalabka biraha ah ee birta ah waxaa loola jeedaa boodhadh ka samaysan bir bir ah, oo ay ku jiraan birta birta ah ee SUS201 bolts, bir birta ah ee 'SUS304 bolts', birta biraha ah ee 'SUS316 bolts', iyo birta birta ah ee 'SUS316L bolts'.
Dhexdhexaad kulul galvanized godka godka madaxa
Cidhifka kore ee madaxa madaxa ee silsiladda madaxa hexagon waa wareegsan tahay, dhexda-na waa mid laba geesood leh, halka booska hexagonal-ka uu yahay midka leh madaxyada lagu maroojiyo ee leh geesaha laba geesoodka ah. Kadib daaweynta dusha galvanizing kulul, saameynta anti-daxalka ayaa la gaadhay.
Hot galvanized Dibadda Hexagon Bolt
Waxaa jira magacyo badan oo kala duwan oo loo yaqaan 'bolt hexagonal bolt', tusaale ahaan, waxaa lagu magacaabi karaa batoonka laba-geesoodka ah, tusaale ahaan, waxaa lagu magacaabi karaa booska laba-geesoodka dibedda. Waxaa sidoo kale loo magacaabi karaa bool laba geesle ah. Waxaas oo dhami waa isku wax. Kaliya waa in caadooyinka shaqsiyadeed ay ka duwan yihiin.